Sida loo arko astaan ​​gaar ah barta Instagram | War gadget
Paco L Gutierrez | | General, Tababarada
Instagram shaki la’aan waxay noqotay arjiga ugu muhiimsan uguna habboon ee lagu wadaagayo sawirrada iyo fiidyowyada. Ka gudubka "aabbaha" Facebook, maaddaama codsigan uu noo oggolaanayo inaan wadaagno sawirrada si ka fudud adoo adeegsanaya miirayaasha leh nuqul ku habboon isticmaale kasta. Sida Facebook oo kale, waxaan ku ilaalin karnaa astaanteenna asturan, si ay kaliya u arkaan kuwa na soo raaca oo aysan u muuqan qof kasta oo internetka xiiseynaya.
Xisaabaadka gaarka loo leeyahay ee 'Instagram' waxaa arki kara oo keliya kuwa aan aqbalno marka la codsado. In kasta oo muuqaal furan qof kastaa u arko iyada oo aan loo baahnayn tallaabo hore. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaabab loo arko muuqaal gaar ah oo ka gudbaya xaddidan. Tani gebi ahaanba waa sharci, qof kastaa wuu sameyn karaa iyada oo aan loo baahnayn xirfadaha kombuyuutarka. Maqaalkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo arko astaan ​​gaar ah barta 'Instagram'.
1 Sida loo arko astaamaha gaarka loo leeyahay ee 'instagram'
1.1 Soo gudbi codsi dabagal ah
1.2 Adeegso koonto been abuur ah
2 Codsiyada ama aaladaha si aad u eegto astaamaha gaarka loo leeyahay
2.1 Ka eeg astaanta gaarka loo leeyahay 'Instagram' Facebook-ga
2.2 Ka eeg astaanta gaarka loo leeyahay 'Instagram' Google
2.3 Ku eeg astaanta gaarka loo leeyahay 'Instagram' oo leh hashtags
2.6 Daawade Sawirka Gaarka ah
Sida loo arko astaamaha gaarka loo leeyahay ee 'instagram'
Dabeecad ahaan bani-aadamka sida xayawaan kasta, aad ayaan u xiiseyneynaa sidaa darteed waa wax aad u macaan in la arko astaamaha gaarka loo leeyahay ee 'Instagram'. Tan awgeed waxaan leenahay habab dhowr ah oo aan mid mid ugu sharaxeyno.
Soo gudbi codsi dabagal ah
Waxaan ku bilaabaynaa habka ugu fudud uguna fudud, waa wax inkasta oo ay fududahay oo ay hal ilbiriqsi nagu qaadato, waxay ka tagi doontaa diiwaanka raadkeena, maadaama qofka aan dooneyno inaan soo booqano uu codsi ka heli doono astaantooda. Waxaan codsi u dirnaa isticmaalehaan markii la aqbalo waxaan si fudud u arki karnaa astaanta InstagramWaxay umuuqataa mid run ah laakiin waa sida ugufiican ee si xor ah loogu arki karo koonto Instagram gaar loo leeyahay.
Adeegso koonto been abuur ah
Haddii aynaan doonayn inaan ka tagno raadadka aqoonsigeenna oo aan dooneyno inaan aragno astaamaha qofkaas iyagoon ogeyn inay annaga tahay, waxaan isticmaali karnaa koonto been ah. Waxaan ku abuureynaa xog been abuur ah sawirro been abuur ah waxaanna u dirnaa codsi dabagal ah, haddii isticmaalehan uu aqbalo codsiga waxaan arki karnaa astaantooda iyada oo aan wax caqabado ah jirin. Waa wax caadi ah in lagu arko akoonno been abuur ah barta Instagram badankoodna waxaa loo abuuray ujeeddooyinkan.
Qarinta aqoonsigeena waa muhiim, laakiin milkiilaha astaanta gaarka loo leeyahay waa inuu ogolaadaa codsigeena sidaa darteed waa muhiim in loo adeegsado jaantus lagu kalsoonaan karo iyo sawirro koontada beenta ah. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho sawirada bilaa xuquuqda lahaanshaha si abuurka koontada aysan noogu keeni karin nooc dhibaato ah.
Codsiyada ama aaladaha si aad u eegto astaamaha gaarka loo leeyahay
Haddii qaababkii hore (kuwa ugu fudud) ay shaqeyn waayaan waxaan heysanaa qaabab kale. Waxaa jira qalab lagu daawado barta Instagram oo naga caawin doonta inaan aragno xisaabaadkaas gaarka loo leeyahay. Dhamaantood waxay leeyihiin shuruudaha asturnaanta iyo shuruudaha Instagram.
Ka eeg astaanta gaarka loo leeyahay 'Instagram' Facebook-ga
Instagram waxaa lagu iibsaday 2012 Facebook, sababtaas awgeed labada shabakadood ee bulshada si buuxda ayey isugu xiran yihiin waana macquul in lala wadaago farriimaha Instagram isku mar Facebook. Shaki la'aan, waa ikhtiyaar aad ufiican oo lagu fiiriyo astaamaha gaarka ah ee qofka ee hadana leh astaantiisa guud ee Facebook.
Tusaale ahaan, haddii astaanta gaarka ah ee qofka ay leedahay qoraalladooda si marka loo soo galiyo Instagram ay sidoo kale loo galiyo aaladda Facebook-ga tanina ay tahay mid guud, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan galno mid kasta oo ka mid ah qoraalladooda iyada oo aan wax xaddidaad ah la saarin.
Ka eeg astaanta gaarka loo leeyahay 'Instagram' Google
Hab kale oo fudud oo hawshan lagu dhammaystiro waa Google. In kasta oo astaamaha gaarka loo leeyahay ee 'Instagram' ay ilaalinayaan asturnaanta koontada si kaliya kuwa raacsan ee idman ay u arkaan waxa ay ka kooban tahay, kuwan waxaa laga arki karaa mashiinka raadinta Sawirada Google.
Markaad galaysid sawirrada Google, waxaan galnaa magaca isticmaalaha astaanta gaarka ah ee aan rabno inaan aragno, sawirrada qaar ee isticmaalehan waxaa lagu sifeeyaa shil markii aad ku daabacdo mashiinka raadinta. Tani waxay noqon kartaa natiijada calaamadahaas la isticmaalay ama in dadka kale ee leh astaan ​​guud ay ku calaamadeeyeen daabacaadahaas. Qaabkan waxaan si buuxda u ogaaneynaa tan iyo markii aan ku sameyn karno raadinta habka qarsoodiga ah ee biraawsarkayaga.
Ku eeg astaanta gaarka loo leeyahay 'Instagram' oo leh hashtags
Haddii aan dooneyno inaan la socono wax walba, xitaa kuwa astaamaha gaarka loo leeyahay ee 'Instagram' ee aanan marin u helin, waxaa jira hab fudud oo lagu sameeyo. Hashtags ama tags waa aalad waxtar leh si loo arko waxa dadka kale wadaagayaan. In kasta oo astaanta asturnaanta gaarka ahi tahay, tagsyadu waa caam, sidaa darteed daabacaad kasta oo ay kujirto sumad waxaa arki doona malaayiin isticmaaleyaal ah.
Waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan raacno hashtag-yadaas oo uu wadaago adeegsadaha gaarka ah ee 'Instagram' ee aan dooneyno inaan aragno. Waxaan ka raadin doonnaa baarka soo jeedinta ee 'Instagram' oo waxaan gujin doonnaa "raac". Si kastaba xaalku ha ahaadee, markasta oo aan dooneyno inaan aragno barta gaarka loo leeyahay ee 'Instagram' waa inaan ogaano inay jiraan macluumaad shaqsiyadeed halkaas haddii ay gaar tahayna waa sababta oo ah qofkaasi ma doonayo inuu cid la wadaago. Kuma talineyno inaan dadweynaha u bandhigno wax kasta oo aan ku arki karno qoraalladan si aan loogu jabin sharci kasta oo dembiyada sida xatooyo aqoonsiga ama waxa loogu yeero phishing oo aan horey uga soo hadalnay maqaal kale.
Qalabkani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aan ka helno internetka, wuxuu noo oggolaanayaa inaan aragno koontada gaarka loo leeyahay ee 'Instagram' iyada oo aan la raacin. Waxaan u adeegsan doonaa qalabkan si aan u furno astaanta si aan u aragno daabacaadahaaga oo dhameystiran. Waa inaan hubinnaa inaanan lagu furin qalabkan mobilkaaga.
Waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan furno aaladda oo aan galno magaca isticmaalaha leh astaantiisa gaarka ah barta Instagram. Marka hawshu dhammaato, waxaan arki doonnaa cinwaanka koontada waana furi karnaa.
Qalab kale oo wanaagsan oo lagu heli karo waxyaabaha ku jira xisaabaadka gaarka loo leeyahay ee 'Instagram'. Daawadeyaasha waxyaabaha ka kooban ee Instagram gabi ahaanba waa bilaash waxayna ku filnaan doontaa in la galo degelkeeda oo lala socdo astaanta aan dooneyno inaan ku galno adoo galaya magaca. Adeegsiga agabkani waa mid gebi ahaanba aamin ah milkiilha koontaduna ma lahan wax calaamado ah joogitaankeena astaantooda. Uma baahnid inaan ku galno koontadayada si aan u adeegsanno qalabkan.
Daawade Sawirka Gaarka ah
Kani waa mid kamid ah aaladaha ugu fudud ee lagu arki karo astaamaha Instagram-ka ee qarsoon. Waxaan ubaahanahay oo kaliya inaan galno magaca astaanta aan rabno inaan aragno. Waxaan si dhakhso leh u arki doonnaa astaanta isticmaalehaas su'aasha laga qabo. Waxaan kaliya u baahanahay inaan ku helno boggooda internetka oo bilaash ah oo guji badhanka raadinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo arko astaan ​​gaar ah barta Instagram
Elephone R8 dib u eegista smartwatch
Saldhiga lacag bixinta DualSense iyo kantaroolaha DualSense ee PS5 [Unboxing]